Soosaarida Qoryaha Qoryaha Shiinaha & Warshadda | Zhanyu
KOOXAHA TARBIYADA CABLE
Boolal qoryo ah
Hex madaxa boolal qodista madaxa
Hex godka bolt cup madaxa
Truss madaxa is qodista sc ...
· Heerka: DIN / ASTM
· Cabbirka: m6-m12
· Kartida Bixinta: 200 Tan bishii
· Waqti Muunad ah ： 3-5 maalmood
· Habka lacag bixinta: T / T, L / C
Qoryaha alwaaxa, oo sidoo kale loo yaqaan 'alwaaxa qoryaha', wuxuu la mid yahay mashiinka mashiinka, laakiin dunta xariggu waa xarig khaas ah oo khaas ah, kaas oo si toos ah loogu xajin karo qayb ka mid ah alwaax (ama qayb) si loogu xiro qayb bir ah (ama biraha aan ahayn) oo leh dalool leh qayb alwaax ah. Xiriirinta noocan ah sidoo kale waa lakala saari karaa.
Faa'iidada xajmiga qoryaha ayaa ah inay leedahay awood isku dhafan oo ka badan ciddiyaha, waana laga saari karaa oo la beddeli karaa, taas oo aan dhaawaceynin dusha sare ee qoryaha oo aad ugu habboon in la isticmaalo.
Noocyada caadiga ah ee boolal alwaax ah waa bir iyo naxaas. Marka loo eego madaxa ciddiyaha, waxaa loo qaybin karaa nooc madaxa oo wareegsan, nooca madaxa oo fidsan iyo nooca madaxa oval. Madaxa ciddiyaha ayaa loo qaybin karaa fur xaraf ah iyo iskutallaab dabacsan. Guud ahaan, wareegga madaxa wareega wuxuu ka samaysan yahay bir khafiif ah oo buluug ah. Wareejinta madaxa fidsan waa la safeeyey. Madaxa madaxa ee oval waxaa badanaa lagu dhajiyaa cadmium iyo chromium. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu rakibo caleen dabacsan, jillaab iyo qalabka kale ee qalabka. Faahfaahinta waxaa lagu go'aamiyaa dhexroorka iyo dhererka usha iyo nooca madaxa ciddiyaha. Sanduuqa ayaa ah cutubka wax iibsiga.
Waxaa jira laba nooc oo mashiinno wax lagu rakibo oo lagu rakibo boolal alwaax ah, mid waa toosan yahay kan kalena waa iskutallaab, kaas oo ku habboon qaabka jeexjeexa madaxa xaabada. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira darawal gaar ah oo lagu rakibay daloolinta qaansada, taas oo ku habboon rarista iyo dejinta boolal qoryo waaweyn. Waa ku habboon tahay oo badbaadin kara shaqaale.
Hore: Hex madaxa boolal qodista madaxa
Xiga: Gawaarida gawaarida
DIN 741 Hardware, jiidaya Zinc plated carbon st ...
Heerka C-qaybta birta ee unistrut waa kulul-di ...
Shiinaha handan hebei keena barroosinka la taaban karo Drop -...
Kaarboonka birta leh ee laba geesle
Handan Yongnian Zhanyu Fidiyaha Warshadaha Co., Ltd.